Tag: malee ohye | Martech Zone
Tag: malee ohye
Khamiis, Agoosto 23, 2012 Axad, Sebtembar 8, 2013 Douglas Karr
Hadda uun baa helay e-maylkan: Waxaan maqlay hadalka Douglas ee Blog Indiana oo ku saabsan sida SEO u dhintay erayga muhiimka ahna muhiim uma aha sidii ay ahaan jireen. Sidee wax ku ool ah ugu qancin kartaa macaamiisha tan? Ma xiiseyneysaa inaad qaadato. Xusuusin: In kasta oo ereyada furaha ahi aysan muhiim ahayn… haddana waa muhiim in la adeegsado ereyada muhiimka ah. Waqti badan ayaan kula qaadanaa macaamiisheenna baaritaanka ereyga muhiimka ah. Boggan aan la wadaagay dhagaystayaasha
Dhagsii fiidiyowga soo socda: Waxaa laga yaabaa in qaybta ugu wanaagsan ee fiidiyowgaan ay tahay in talooyinku ay yihiin kuwo fantastik ah - oo faahfaahsan oo sax ah labadaba! Waxaan ka helay fiidiyowyo badan oo dheeraad ah Shaqaalaha Qandaraaska, waxaana xitaa jira fiidiyowyo badan kanaalka Chuck ee Youtube channel. Sidoo kale, fiiri barta Chuck!